Kazhinji kutaura, tinotenga machina ekuchenesa mudzimba kuti ayamwe marara, asi kutaura zvazviri, zvinhu zvakawanda hazvigone kuyamwa, uye unogona kusaziva zvakanyanya. Saka nhasi tichakurukura izvo zvisingakwanise kuyamwa nevachenesa. Rangarira kutarisisa uye usaite chero chinhu chinokuvadza kune vacuum cleaners.
Mazhinji emagetsi ekutsvaira atinoshandisa izvozvi akabata maoko-akabata vachu Isu tese tinoziva kuti ruoko-rwakabata vacuum cleaners haigone kutora mvura, kusanganisira marara ekicheni uye marara akanyorova. Vanogona chete kutora imwe yakaoma marara. Nekudaro, iyo yekuchenesa bhaketi inokwanisa kutora mvura, inoenderana chaizvo nenzvimbo hombe kana mamwe marara emumba.
Chechipiri ndechekuti ruoko-rwakabata vacuum cleaner harugone kutora zvinhu zvesimbi. Imwe ndeyekuti inogona kukwenya kapu yeguruva, uye imwe yacho ndeyekuti inotenderera pakukwirira kwemukombe weguruva, izvo zvinogona kukanganisa kukuvadzwa kwefaera skrini uye kukonzera imba yekuchenesa imba kuti isashande zvakajairika.
Chechitatu ndicho chinhu chikuru chezvinhu. Pombi dzedu dzakatetepa uye diki. Izvo zvinhu zvakakura zvezvinhu zvinovhara mapaipi. Chechipiri ndechekuti havakwanise kutenderera nekumhanyisa kana vachinge vayamwa mukati. Zvisinei, vanochenesa mweya vanokwanisa kupinza nzungu uye matehwe embeu yemavise, chinova chinhu chine simba kwazvo mumidziyo yekuchenesa mudzimba.
Vacuum cleaners haigone kuyamwa chero chinhu. Unonzwisisa here? Nhasi, ndezve kunyanya zvakabatwa nemaoko vacuum cleaners. Kana iri mamwe masitaira ekutsvaira vacuum, anogona kunge akasiyana, saka ndokumbirawo urangarire kuti uone izvo kana iwe uchivatenga.